Yongsheng yemubhedha wedenga repamusha mubhedha, mutema, mubhedha wakapetwa kaviri Mugadziri uye Fekitori | Tianda
Shandisa Yongsheng imba mambokadzi cushion mubhedha kugadzira paradhiso senge yekurara nzvimbo yekudzokera pamutengo unodhura. Yakarongedzwa zvine hungwaru mitsara, yakasarudzika bhatani tufts, yakanakisa mapapiro ezviyero uye yakapetwa kaviri mutsara wechipikiri musoro trim inopa uyu mubhedha wakazara wakazara ... kupfuma uye kwazvino kutaridzika kwawagara uchida. Asi mubhedha mukuru waYongsheng wakanaka here? Dhizaini yaro yepamusoro-soro zvinoshamisa zvakachipa. Chekupedzisira, iri sarudzo inodhura kune avo vane zvido zvinodhura. Mubhedha wemakusheni wakareba uye wakafadza, unodziya uye uzere.
Yakasununguka velvet grey mambo mubhedha sutu inowedzera kutaridzika kwemazuva ano kune yako tenzi suite., Iyi yekuvata inogona kuwedzerwa zviri nyore kune yako nzvimbo. Isu tinofarira mashandisirwo emisoro yemisumari anowedzera kune rangano.
Yongsheng imba yemubhedha mubhedha inounza yakasarudzika kune yako yekurara. Uyu mubhedha unoshamisa unoratidzira faux yeganda yakasimudzwa musoro webhokisi ine stud trim uye bhatani tufts. Iyo yakasviba nhema inoenderana nechero dhizaini yekamuri zvakakwana. Iwe haudi kupotsa runako rwemazuvano!
Matiresi uye hwaro / machira emuchirimo anowanikwa uye anotengeswa zvakasiyana.
Nemitsara yakapusa, yakasarudzika makumbo akavhurika uye chic yakadzvanywa mubhodhi, uyu mubhedha muhombe wepuratifomu une zvese zviratidzo zvepakati pezana ramakore maitiro.
· Inosanganisira headboard, pedals, matinji uye slats
Nhema yekugadzira yeganda mukati
Bhatani rakabvarura bapiro kumashure bhodhi rine pini musoro trim
Yakafumurwa tsoka dzehuni
Mubhedha haudi hwaro / hwetubhedha
· Metiresi inowanikwa, inotengeswa zvakasiyana
Inofungidzirwa Nguva yeGungano: Maminitsi makumi matanhatu
• Upamhi: 69.50 "
• Kudzika: 86.88 "
Kureba: 55.50 "
Kureba kwakaringana (min): 49.50 "
Kureba kunogadziriswa (max): 55.50 "
• Vakaunganidza mambokadzi akasimudza mubhedha Upamhi: 69.50 "
• Vakaunganidza mambokadzi akasimudza mubhedha Kudzika: 86.88 "
• Vakaunganidza mambokadzi akasimudza mubhedha Kureba: 55.50 "
• Upamhi hwePamusoro: 69.50 "
• Headboard Kudzika: 4.00 "
• Kukwirira Kwemusoro: 55.50 "
Upamhi hwebhodhi: 63.00 "
Kudzika Kwebhodhi: 1.75 "
Kureba kwebhodhi: 10.88 "
• Upamhi hwechitima: 61.25 "
• Njanji kusvika pasi: 4.75 "
Chibvumirano Chakagumisa PDF Download
Zvita 29, 2020 Jinan Mingchang musoro wekugadzira Co., Ltd.
2021.3.3 Jinan Tianda Textile Technology Co, Ltd
Zvadaro: Yongsheng imba pamutsago mubhedha